Matongerwo eNyika, 25 Mbudzi 2019
Muvhuro 25 Mbudzi 2019
VaChamisa Vanoti Hapana Chakaipa paNhaurirano
Mutungamiri weMDC VaNelson Chamisa vanoti vakagadzirira kuita nhaurano nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kana chete dzichikwanisa kunyukura nyika mumadhaka mairi.
Mbudzi 23, 2019
VaChiwenga Vanodzoka Kubva kuChina Kwavanga Vachirapwa
Vanhu vakawanda vanoti vakashamisika zvikuru kuona mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Va Constantino Chiwenga, vachisvika panhandare yendege muHarare pasina vakuru vakuru muhurumende vachivachingamidza.
Bazi rezvemari rinoti richawedzera mari pamwe chete nekuunza mari ine huremu hwakakura munyika senzira yekugadzirisa dambudziko remari munyika.
Vanhu vakawanda vachema vamwe vakaratidza kusuwa apo mutongi wedare, VaTinashe Tashaya, vatongera Melusi Moyo, Josephat Ngulube, Fortune Masuku naOtilia Sibanda kuti vagare mujeri kwemakore manomwe mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekukonzera mhirizhonga.
Nyaya yekuChinja Mazita eMigwagwa Yokonzera Mutauro
Nyaya yedare remakurukota yekuchinja mazita emigwagwa yakonzera mutauro wakanyanya vamwe vachiti mutemo wakatyorwa uye kupedza mguva kuzeya nyaya dzakadai mudarenyika yakatarisana nenzara.
Nhengo dzeZanu-PF dzave kuramba kuti makomiti anotungamirwa nebato reMDC aite basa rawo kusvika racherechedza VaEmmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika.
'Komishini Yakazvimiririra Ingabatsira Vanhu Vanoshungurudzwa Nehurumende' - HRW
Zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vasina mhosva nemapurisa kutanga svondo rapfuura, sangano rinorwira kodzero dzevanhu, re Human Rights Watch (HRW), rinoti panofanira kuumbwa komishini yakazvimiririra kuitira kuti vanhu vawane batsiro pakumhangarira hurumende kana ichinge yavatadzira.